"आरोप प्रत्यारोप र गालीगलौज यहिँ बन्द गरौं" - विश्व आदर्श पण्डित - लण्डन काठमाडौँ
यसै साल पौष ५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेता पनि सम्माननीय सर्बोच्च अदालतले पून:स्थापना गरेर सरकार र दलहरुलाई अगाडी बढ्न निर्देशन दिएको छ । तथापि त्यसपछी उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई दलहरुले सुल्झाउन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य, जनसम्पर्क समितिका नेता तथा एन आर एनका केन्द्रीय सल्लाहकार श्री विश्व आदर्श पण्डितसंग ‘लण्डन-काठमाडौं’ का तर्फबाट त्रिलोचन गौतमले सम्पर्क गरि छोटो प्रतिक्रिया माग्दा वहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको छ:
वर्तमान परिस्थितिमा नेकपा वा बामपन्थीहरुको क्रियाकलाप र भूमिका प्रति के कस्तो धारणा राख्नु हुन्छ?
झण्डै दुई तिहाई सिट जितेर पनि त्यसको गरीमालाई वचाऊन नसक्नाले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जनको संघारमा ऊभ्याईएको कुरा त सर्वविदितै छ । यसमा छलफल गर्न सकिएला तर अहिले म यता जान्न । कम्युनिष्ट मेरो पार्टि हैन तर पनि कम्युनिष्टका चारवटै घटकमा कुनै न कुनै समुहमा आफ्ना पनि साथिहरु लागेका छन । मन नमिलेपछि संगै हिड्न पर्छ भन्ने त छैन तर जे भै रहेको छ गलत भै रहेको छ । समाचार र बिचारहरु पढ्न पनि यति सारै गार्हो भयो कि चुप लागेर वस्न सक्ने स्थिति रहेन, यति सम्म तल झरेर एक आर्कालाई गालि-गलौज गर्न कसरी सक्नु हुन्छ वहाँहरु ? केहि संकोच त लाग्नुपर्ने हो मित्रहरुलाई ।
कुरा नमिले असहमत छु भन्न पाईन्छ । एक अर्काको कुरा खोल्न पनि पाईन्छ, हामिलाई पनि त्यसको अनुभव छ । तर त्यसो गर्न पाईन्छ भन्दैमा लाजै नछोपिने गरि खोल्न त भएन नि ! कम्तिमा आफ्नो ईज्जत त ढाक्नोस । सके आ-आफ्नो वाटो लाग्नोस नसके मिल्नोस । यो हाम्रो पार्टि, तँलाई के मतलव नभन्नुहोला कम्युनिष्ट साथीहरुले । हाम्रा पनि केहि नातागोता, ईष्टमित्र, साथिभाईहरु छन त्यहां । यो कसैलाई खुंच्चिङ भन्ने बिषय र परिस्थि पनि होइन ।
तर एऊटा कुरा के सत्य हो भने नेपालका लगभग सबै दलका धेरै नै नेतालाई सत्ता, शक्ति र पैसाको ऊन्माद चढेको छ र त्यो ऊन्मादले तिनलाई नराम्रो संग विगारेको छ । यति कुरो वेलैमा वुझे राम्रो हुने छ । पार्टि भित्रको अनपेक्षित द्वन्दका कारण कतिपय वामपन्थि मित्र हरुले सामान्य विवेकले यो सहि यो गलत भनेर सजिलै छुट्याऊन सकिने कुरामा पनि आंखा चिम्लेको चाहिं पक्कै हो त्यसो भन्दैमा संगै हिडडुल ऊठवस गरेका साथिसंग अभद्र व्यवहार जरुरी छ र? राजनैतिक इतिहासले विभिन्न कालखण्डमा अपत्यारिला विभाजन, मुठभेड अनि फेरी मिलन भएका नजिर हरु छन । भोलि फेरी एक हुँदा संगै उभिने परिस्थिति हुनु पर्छ । स्वदेशमा होस् या बिदेशमा, पहिलो कुरा हामी नेपाली हौं, त्यसपछि मात्र विभिन्न पार्टी र गुट हौं त्यसैले यो आरोप प्रत्यारोप र गालीगलोजको म्याराथोन यहिँ बन्द गरौं ।
त्यसै सन्धर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा अन्य दलहरुको भूमिकाको बारेमा तपाइको धारणा?
देश अनिर्णयको वन्दि भएको छ । सत्ताधारी मुख्य दलनै गैरजिम्मेवार भैदिनाले अन्यौल छाएको छ । संसदको ऊपहास गरीएको छ, संसदलाई कामदिने कर्यब्य सरकारको हो तर सरकार आफ्नो ईच्छा विपरीत पुनर्स्थापित भएको संसद को भुमिकालाई कमजोर तुल्याऊनमा लागेको देखिन्छ त्यसैले ऊदासिन छ । सवै समस्याको निकास संसदले दिन पर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। अहिले सम्म माओवादिले पनि नैतिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिई सक्न पर्ने हो तर ऊ पनि सत्ताको दाऊपेचमै रुमल्लिएको र सर्वोच्चको निर्णयले हतप्रभ देखिन्छ ।
नेपालि कांग्रेसको कांधमा जिम्मेवारी आएको छ तर साना दलका गलत नियत र शर्तका कारण र पार्टिले आशातित निर्णय लिन सकेको छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सत्ता भन्दा संसदिय व्यवस्थाको गरीमालाई जोगाऊन संसदलाई सक्रिय, सक्षम र सवल वनाऊन तर्फ प्रमुख प्रतिपक्षदलको दायित्व हो र यो प्रक्रियामा सत्ताधारी र अरु सानादलमा समेत आम जनदवाव सृजना गर्नु अहिलेको ज़िम्मेदारी हो ।
संगसंगै नयां सरकार गठनको पहल पनि ठोस रुपमा गर्न पर्ने देखिन्छ । अन्यथा संसदिय प्रक्रियालाई अवरुद्द गर्ने पहललाई संसद पुनर्स्थापनाले रोक लगाईसकेको अवस्थामा संसदिय प्रक्रियालाई सामना गरेर सहमतिमा चुनावमा जाने निर्णय लिंदा पनि त्यति फरक नपर्ने हो भन्ने मेरो वुझाई छ ।